Golaha Wakiilada Somaliland oo isku sidkay doorashada madaxweynaha & wakiilada – Mareeg.com somalia, World News and Opinion.
Golaha Wakiilada Somaliland oo isku sidkay doorashada madaxweynaha & wakiilada
A warsame 30 September 2014 1 October 2014
Mareeg.com: Golaha Wakiilada Maamulka Somaliland ayaa manta isku raacay in labada doorasho ee Madaxtooyada iyo Wakiilada hal mar la wada qabto, waxaana sidoo kale goluhu ogolaaday Xeerka diwaangalinta Maddaniga ah iyo codbixinta.
Golaha oo ay saaka fadhiyeen 66 Mudane waxaa mooshinka ah in doorashada Wakiilada iyo Madaxtooyada mar la wada qabto ogolaaday 64 mudane, halka hal mudane diiday, gudoomiyuhuna uusan codeyn. Ila tirade 64-ka ayaa ogolaatay Xeerka diwaangalinta Madaniga ah iyo Diwaangalinta Codbixinta.
Gudoomiye Cabdiraxmaan Cirro, oo warbaahinta la hadlay kadib go;aanka Golaha wayaa sheegay iney arrintaas u yeeleen iney yareeyaan dhaqaalaha ku baxa doorashada, maadaama Somaliland aysan heysan dhaqaale badan.
Mooshinkan ku aadan in doorashada Madaxweynaha iyo tan wakiilada mar la wada qabto, ayaa u muuqda inuu jawaab u yahay hadal hayn ah in sanadka 2015-ka la qabto doorashada wakiilada, dibna loo dhigo tan madaxweynaha.
Ma cadda jawaabta madaxweyne Siilaanyo ka bixin doono go;aankaas, iyadoo gudoomiyaha golaha wakiilada C/raxmaan Cirro sheegay in goluhuu uusan xukuumadda iyo madaxweynaha kala tashan go’aanka uu manta gaaray.
Ciidamada Soomaaliya iyo Amisom oo ku wajahan degmada Cadale
Ciidamada dowladda & Amisom oo la wareegay deegaano ka tirsan Shabeellaha Dhexe